Fulbana 21, 2007 (ABO) - Gaafa Fulbaana 28, 2007, addunyaan guyyaa Walabummaa Odeeffannoo ykn press ayyaaneffatti. Fulbaanni 28, bara baraan, guyyaa preesii walabaa jedhame beekkamuu dhaan, biyyoota lafarratti kabajama. Guyyaan kun, guyyaa biyyootaa fi mootummootni biyya lafaa, kan heeraa fi seerota qabaniin mirga dubbachuu fi barreessuu lammiilee isaaniif kabajani fi isaan mirgoota kanneen dhiitan itti gamaaggamanii dha.
Guyyaan preesii walabaa, sadarkaa dhuma adduunyaattu, guyyaa itti mootummootaa fi biyyootni mirgoota lammiilee kan akka odeeffannoo argatu, dabarsuu fi odeessa wal jijjiiruun diriirsani jiran itti faarfamanii dha. Guyyaan preessii walabaa, Fulbaannii 28, bara baraan, hiree itti biyyootaa fi mootummootni mirgoota press ukaamsan, mediayaalee walaba tahan ugguran, walumaa gala mirgoota dubbatuu, barreessuu, fi odeeffannoo wal jijjiiratuu hawaasa ofiif bulchaniitti waakkatan sadarkaa adduunyaatti itti balaaleffatani fi abaaramanii dha.
Itoophiyaatti, Mootummaan TPLF/EPRDF Mallas Zenaawiin durfamu, yeroo gadaa gartuu kanaa kan haga yoonaa keessatti, sirna walabummaa gaazexeessummaa awwaaluun beekamee dha. Sirni Mallas Itoophiyaatti yeroo waggoota 16-n dabrani guutuu kanneeniif, sirna e mirga odeeffannoo ummata ‘nan bulcha’ jedhuutti waakkatuun galmeffame ta’e, mediyaa diina duraa taasifatuun beekkameera. Gabaasaan jaarmayaa mirga gaazexeessitootaaf falmu, (CPJ) baroota hundaa dhugaa kanaaf raga dha.
Ayyaana guyyaa Walabummaa Pressii baranaa Fulbaana 28-tti, Sirnii faashistii Itoophiyaa Mallas Zenaawiin Durfamu, sagalee ol-aanaan balaaleffatamu fi abaaramu qaba. Sirni kun, ar’a yeroo kamuu caalaatti fi mootummoota biyyoota Afrikaa kamuu irraa oliitti kan jechuun danda’amu, walabummaa gaazexeessummaa ukaamsee waan argameef.
Mootummaan goolessituun TPLF/EPRDF ummatoota Itoophiyaa humna qawween bitaa jiru kun, hawaasa biyyattii miliyoona torbaatama ol ta’u odeessa dhugaa fi barbaachisuuf itti waakkatuun dukkana keessatti marsee bitaa jira. Sirni Mallas mootummoota Afrikaa jiran kamuu caalaatti gaazexeessitoota fixe, hidhee, qaama laamshessee fi akka biyya arihataman taasise jira.
Itoophiyaatti ar’a mediyaa wayyaanee harka jiruu, kan firoottani fi miseensotni murna TPLF deegaraniin tamsa’an irraa kan hafe, radiyoolee, TV, gaaxezaa, marsaalee Internet (websites), paltalk fi kkf walaba tahan hundumaa cufsise jira. Marsaalee Interneetii dhaabota sirnichaan morman akka ABO, ONLF, SLF fi kkf biyyattii keessatti akka hin mul’aneef itti cufus raawwatuun dhadataa jira. Wayyaneen amma ammo radiyoolee ummatootni biyyattii madda odeessaa tasifatan kanneen akka SBO, Radiyoo Hiriyyaa (ONLF), Tinsa’e (CUDP) fi buufatoota akka SUBE, VOA fi DW illee osoo hin hafin, akka biyyatti hin dabarreef sabotage godhuutti fuulleffate jira.
Sirni Wayyanee akeeka abaaramaa kana bakkaan gahachuu dhaaf, biyya angawaa Asia tokkoon wal ta’uun, buufata addaa tokko kan radiyoolee oliitti tarrifaman ukaamsu ykn akka qulqullinaan hin dhageeffatamneef taasisaa jira. Kanaaf jaarsisuuf ammo qarshii ummataa biliyoonotaatti shalagamuun itti qisaasee jira.
Kanaatti dabalee, sirnii Mallas ummatoota ololoota mediyaaleen isa harka jiran, kan oduu sobaa fi gara tokkee facaasan irraa kan hafe, buufatootni biraa odeeffannoo haalota ummataa, biyyattii, naannichaa fi aadduunyaa ibsan akka ummatootaan hin hordofamneef karaa dabballoota isaanii biyyoota alaa duula geeggessuurratti argamu. Gartuun doofummaa babal’isuun jiraatuu barbaadu TPLF kun, mootummotaa fi kubbaniyoota garii buufatootni oduu walabni akka SBO, radiyoo Hurriyaa (ONLF), Tinsa’e (CUDP), akkasuma marsaalee internet jaarmayootni kanneen irraa kireeyfataman akka tajaajila kanneen laachuu dhaabaniif maallaqa guddaa dhangalaasuun ijibaata hojjaturraatti argamu.
Kana qofa osoo hin taane, sirnii wayyanee, imaammata duubaatti hafaa odeessi dhugaa akka ummata hin geenneef Itoophiyaatti karoorfame, ittiin hojjataa jiran kana, Soomaliyaattis bal’isuurratti argama. Karaa gartuu Cehumsaa Soomaliyaa, lukkee TPLF bakka buufattee jirtu, Soomaliyaattis imaammata wal fakkaataa diriirsuun akka tooftaa ummataan of-jalaatti qaban tokkootti akka itti dhimma bahamu taasifamaa jira.
Ar’a Soomaliyaatti loltootni Itoophiyaa fi ceehumsaa Soomaliyaa, akkuma Itoophiyaatti, yakka akka gaazexeessitoota ajjeessuu, ukaamsuu, biyyaa ar’u, buufatoota oduu waraanaan saka’u, mihoota studio saamuu, gaazexaalee fi buufatoota radiyoo akkasuma TV odeessa dhugaa tamsaasaan cufsisiisuu, kaaniis sodaachisuu fi walumaa gala mirga preessii walabaa awwaluu hujii duraa taasifatani jiru.
Akeekni Mootumama abbaa Irree Mallas, kan hawaasa odeeffannoo maluuf irraa ittisuun, ummata jaamaa taasisani, akka lammiileen yaadaa fi gaaffii tokkoon maleetti Amen! Jedhani isaan jalaatti bulan taasisan kun balaaleffatamu qaba. Walabummaa pressii akkasuma mirga lammiilee sarbuu gartuu goolessituu TPLF/EPRDF kun gaafa Fulbaana 28, barana kan sagalee olaanaan abaaramu qabu dha.
Fulbaana 21, 2007